မပုပ်မသိုးတဲ့ တောင်သုံးလုံးဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ရွှေရောင်ရုပ်ကလာပ်တော် - YomaLan
Home Knowledge မပုပ်မသိုးတဲ့ တောင်သုံးလုံးဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ရွှေရောင်ရုပ်ကလာပ်တော်
မပုပ်မသိုးတဲ့ တောင်သုံးလုံးဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ရွှေရောင်ရုပ်ကလာပ်တော်
ကယားပြည်နယ်၊ လွိုင်ကော်မြို့ဆိုတာ ထင်ရှားတဲ့ မြို့ သာယာလှပတဲ့ မြို့ တစ်မြို့ ဖြစ်ပါတယ်…ဒွေးမယ်နော်..ကိန္နရီကိန္နရာ ….တောင်ကွဲစေတီ…ဘီလူးချောင်း ရေအားလျှပ်စစ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ ငယ်ငယ်ကတည်းက ကျောင်းဖတ်စာအုပ်တွေမှာ သင်ယူခဲ့ဖူးကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်…တောတောင် စိမ့်စမ်း ရေတံခွန်တွေနဲ့ သာယာလှပတာကြောင့် ခရီးသွားပြည်သူတွေ လာရောက်လည်ပတ်ကြတဲ့ မြို့တစ်မြို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်…
ဗုဒ္ဓဘာသာရွှေမြန်မာတို့အနေနဲ့လည်း လွိုင်ကော်မြို့ကို တစ်ခါတစ်ခေါက် အလည်အပတ်ရောက်ခဲ့ရင် တောင်သုံးလုံးဆရာတော်ရဲ့ မပုပ်မသိုးတဲ့ ရွှေရောင်ရုပ်ကလာပ်တော်ကို သွားရောက်ဖူးမြော်နိုင်ဖို့ နှိုးဆော်ချင်ပါတယ်….
လွိုင်ကော်မြို့ရဲ့ တောင်သုံးလုံးတောင်ပေါ်မှာ ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ ရွှေရောင်လွှမ်းတဲ့ မပုပ်မသိုးတဲ့ ရုပ်ကလာပ်တော်ကို ပူဇော်ထားရှိပါတယ်….တောင်သုံးလုံးတောင်ပေါ်ကနေကြည့်ရင် လွိုင်ကော်တစ်မြို့လုံးကို မြင်တွေ့ရပါတယ်….
ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ ရုပ်ကလာပ်တော်ကိုတော့ ပြည်တွင်းပြည်ပခရီးသွားတွေက လာရောက်ဖူးမြော်ကန်တော့ကြပါတယ်….ပရိသတ်ကြီးတို့လည်း လွိုင်ကော်ရောက်ခဲ့ရင် ကိုယ်တိုင်သွားရောက်ဖူးမြော်နိုင်ပါတယ်….မဖူးမြော်နိုင်တဲ့ ပရိသတ်ကြီးတွေအတွက်လည်း ဖူးမြော်နိုင်ဖို့အတွက် ဆရာတော်ကြီးရဲ့ ရုပ်ကလာပ်တော် ဓာတ်ပုံလေးတွေကို ပြန်လည်မျှဝေဖော်ပြရင်း ကုသိုလ်ပြုလိုက်ပါတယ်နော်…
Writer – Kwee (Jeeptoolay)
Previous articleမန္တလေးမြို့တွင် အပြင်အဆောင်နေ ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းများ အဆောင်မှ နှင်ချခံနေရ
Next articleCovid 19 ကြိုတင်​ကာကွယ်​မှုအ​နေနဲ့ ကိုယ့်​ကိုယ်​ကိုယ်​ Lock Down ချလိုက်​ပြီးဖြစ်​တဲ့ ​ဝေဠုကျော်
yomalan - October 28, 2019 0
အစိုးရကျန်းမာရေး ဆေးရုံများတွင် တာဝန်ရှိသူ ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် အခကြေးငွေမတတ်နိုင်သည့် လူနာ များကို ဆေးကုသမှုမပေးခြင်း၊ ဆက် ဆံရေး မပြေပြစ်ခြင်း ရှိပါကကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနသို့ တိုင်ကြားနိုင်ပြီး အရေး ယူပေးမည်ဟု ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှတာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ပြောသည်။ ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနက ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကို လူနာတွေကို မခြေမငံ မဆက်ဆံဖို့၊ လူနာတွေဘက် ကနေ...
လုပ်သမျှအရာမထင်ဖြစ်ပြီး စိတ်ဓာတ်တွေကျနေတဲ့အချိန်မှာ ဒီစာလေးကို ဖတ်လိုက်ပါ
yomalan - October 16, 2019 0
လောကမှာ တစ်ခါတလေ ကိုယ်ဘယ်လောက်ပဲ ကြိုးစားနေပါစေ၊ ကြိုးစားသလောက် အရာမထင်တဲ့ အချိန်တွေ ရှိတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုအချိန်တွေမှာ ကြိုးစားချင်စိတ်တွေ ကုန်ခမ်းပြီး လောကကြီးမှာ ဆက်မနေချင်တော့လောက်အောင် စိတ်ဓာတ်တွေ ကျနေမိတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုအချိန်မှာ ဘယ်သူနဲ့မှလည်း စကားမပြောချင်၊ ဘာကိုမှ အကောင်းမမြင်နိုင်တော့ပဲ တစ်ယောက်တည်း နေချင်လာပါတော့တယ်။ ဒီလိုလုပ်သမျှ အရာမထင်ဖြစ်ပြီး...
ဖြိုးပြည့်စုံနဲ့အတူ အဖမ်းခံရတဲ့ လေးဘာသာဂုဏ်ထူး ရှင် ညီလေး ငြိမ်းချမ်းကို ဆိုတာ
yomalan - October 8, 2019 0
လတ်တလော လူမှုကွန်ရက်အပါအဝင် သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ရေပန်းစားသွားတဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ အဆိုတော် ဖြိုးပြည့်စုံ နဲ့ လူငယ်လေးနှစ်ဦးကို မူးယစ်ဆေးဝါးသံသယရှိမှုနဲ့ လူမြင်ကွင်း မြန်မာပလာဇာမှာ လက်ထိပ်ခပ် ဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ မူးယစ်ဆေးပြားလို့ ယူဆရတဲ့ အပြား ၁၁ ပြားကို သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပြီး ဒါဟာ မူးယစ်ဆေး ဟုတ်မဟုတ်ကိုတော့...